Donnez l'alerte concernant les évènements d'origine naturel, brutal provoquant des bouleversements importants.
Publiée par reepicheep — Le 04 mars 2017
Novinavinaina hihamahery vaika sy hanatona ny morontsiraka Atsinanan'ny nosy i ny "tempête tropicale" ENAWO amin'ny fiantombohan'ny herinandro ambony izao, ka misy ny fampitandremana miloko MAITSO, hoan'ny faritra ANTSIRANANA I sy II, SAVA, ANALANJIROFO ary ATSINANANA.
Hahiana hiamafy ihany koa ny fitsiokan'ny rivotra manomboka amin'ny Alahady izao, ka mila mitandrina hatrany ny mponina amin'ny morontsiraka AVARATRA ANDREFAn'ny nosy.
Misy ihany koa ny fampitandremana amin'ny hamafin'ny onjan-dranomasina, hoan'ireo faritra manomboka any VOHEMAR ka hatrany TOAMASINA manomboka rahampitso Sabotsy hariva.
Entanina isika rehetra mba samy hitandrina sy hihaino ny vaovao meteo hatrany.
Buzz météo qui s'avère être un fake
Depuis peu, un bulletin facebook de la page de la météo a été...
Maro ny takaitra navelan'ny Enawo, anisan'izany ny teto Nosy Be t...
Ambohimanambola amoron' Ikopa 09 mars 2017 après ENAWO Photo ...
Miarahaba ANTSIKA rehetra ny ekipan'ny MÉTÉO MADAGASCAR, FILAZ...
Vidéo d'une caméra de surveillance à Antsirabe filmant les secousses lors du séisme